IFlip yoNyango lwedijithali yenza ukuThengwa, ukuPhathwa, ukuPhuculwa koMgangatho, kunye nokuLinganisa iiNtengiso eziPhezulu (OTT) ezilula | Martech Zone
Ukuqhuma kukhetho losasazo losasazo, umxholo, kunye nokujonga kunyaka ophelileyo Ngaphaya kwaphezulu (OTTukuthengisa akunakwenzeka ukungahoyi iimveliso kunye neearhente ezimeleyo.
I-OTT ibhekisa kwiinkonzo zosasazo zeendaba ezithi zibonelele ngesiqulatho semveli ngexesha langempela okanye kwimfuno kwi-intanethi. Igama elithile ngaphaya kwaphezulu kuthetha ukuba umboneleli womxholo uya ngaphezulu kweenkonzo eziqhelekileyo ze-intanethi njengokukhangela kwiwebhu, i-imeyile, njl.
Ukusika intambo okwaqala ngokunyanisekileyo phambi kokuba ubhubhane lukhawuleze kakhulu ngokuqikelelweyo 6.6 yezigidi zemizi ezisika intambo Kunyaka ophelileyo, kusenza phantse isine kwisine semizi yaseMelika ngaphandle kwentambo. Enye I-27% kulindeleke ukuba yenze njalo kwi 2021.
Ngokusasaza ngoku kubalwa phantse iipesenti ezingama-70 zokubukela umabonwakude, aba bantu baninzi batsala umdla omkhulu kubathengisi. Ukuchitha imali kwintengiso ye-OTT kulindeleke ukuba itsibe ukusuka kwizigidi ezingama-990 zeedola ngo-2020 ukuya kwi- $ 2.37 yezigidigidi ngo-2025, ukunyuka kancinci ukuya kwindawo ephezulu yomabonakude yokuchitha.
Ngaphandle kweli thuba likhulu, ukwenza intengiso ye-OTT kunokuba ngumceli mngeni kuzo zombini iimveliso ezinkulu nezincinci kunye neearhente. Ngamaqonga amaninzi, kunzima ukwazi ukuba yeyiphi oyikhethayo. Ukulawula ubudlelwane kunye nabapapashi abaninzi kunzima kwaye kunokuba nzima ukulandela iimetrikhi ezifanelekileyo ukuze wazi ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo.
Ukusombulula lo mceli mngeni, iFlip, iqonga lokusebenza kwe-OTT kwiNyango ledijithali, ibonelela ngendlela ekrelekrele yokuthenga, yokulawula kunye nokwenza iphulo le-OTT. Kodwa ngaphaya kwamanqanaba nje okugqitywa kwevidiyo, eli qonga lokuphumelela amabhaso eDigiday libonelela ngeemveliso ngolwazi oluneenkcukacha kwizinto ezenziwa ngokusemagqabini, iijografi, abapapashi, iipartshare, kunye nokunye. Ihambisa ukubonakaliswa kwe-funnel epheleleyo, ukuphakamisa uphawu, kunye nohlalutyo lokunyusa ukunyusa ukuvumela abathengisi ukuba bangazi nje ukuba zeziphi imikhankaso eziqhuba iziphumo (kwaye njani), kodwa zibeka ezi zinto ukuba zisebenze kwangoko, zilungiselela imikhankaso ngexesha lokwenyani ngokubhekisele kwizinto eziguqukayo. Isisombululo senkonzo esigcweleyo siphatha yonke intengiso yobomi be-OTT, esenza ukuba iimveliso kunye neearhente zabo bonke ubungakanani zixhamle kwithuba le-OTT ngokulula.
Umthombo ngokuthe ngqo kwi-Premium Inventory
Ngobambiswano lweshishini olubanzi, iimveliso kunye neearhente zifikelela ngqo kuyo yonke iprimiyamu yomshicileli we-OTT yokwandisa ukufikelela kwabaphulaphuli. Iqonga leFlip linyusa idatha ethe kratya yokunyusa amandla okwenyani, ukuqinisekisa ukuba amaphulo enza konke okusemandleni abo ngelixa ebonelela ngokuqonda okunzulu kunye nokwenza uninzi lohlahlo-lwabiwo mali lomthengisi. Kungenxa yokuba akukho mntu uphakathi, iimveliso zifumana amaxabiso afanelekileyo, ukudala i-ROI ephezulu kunye nokubuyela kwinkcitho yentengiso (ROAS). Kwaye ngenxa yokuba isicwangciso sonke se-OTT silawulwa ngaphakathi kweFlip, akukho sidingo sokuphazamiseka kubudlelwane babathengisi abaninzi okanye iikhontrakthi. Ilula, idityanisiwe kwaye iyasebenza.
Linganisa iZenzo, hayi ukujonga nje
Njengoko umlinganiso we-OTT uqhubeka nokukhula, iimveliso zifuna ukujonga ngaphaya kwamaxabiso okugqitywa kwevidiyo (ibhayari ewe / hayi), ukucofa kunye nokuvela. Ekupheleni kosuku, abathengisi bafuna ukwazi ukuba imikhankaso yabo iqhuba njani iziphumo ezinokulinganiswa, kwaye ekugqibeleni, ukuthengisa. IFlip iyakwazi ukudibanisa la machaphaza, ukulinganisa ii-KPIs njengokukhuphela usetyenziso, ukutyelelwa iwebhusayithi, iinqwelo zokuthenga eziqalisiweyo, kunye nokundwendwela evenkileni. Iqonga libophelela ukujonga kwisiphumo sokwazisa, ukuze ubone ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo.
Le yenye yezona zinto ziphambili ezenza ukuba isisombululo sethu sahluke ngokwenyani-sinokubopha iziphumo kwintengiso kwaye siyenze kuso sonke isixhobo, ukuze ubone ukuba yintoni ehambisa inaliti ngenene. Oko kuthetha ukuba ufumana ulwazi lokwenyani, olusebenzayo lokwenza uhlengahlengiso olunokuba luncedo kwimikhankaso yakho yokufezekisa iinjongo zakho zeshishini elisezantsi.
UMichael Seiman, umphathi weDigital Remedy
Idatha ebanzi yokuqonda okunzulu
Uninzi lwabathengisi banokufikelela kwiinkcukacha zabathengi babo benkampani yokuqala kwaye ayisiyiyo-nto malunga nabathengi abakhuphisana nabo okanye abathengi abanokubakho. NgeFlip, unokuzisa idatha yakho kwaye uyidibanise nemithombo yedatha yesithathu ebanzi yeyeza kunye nokuphucula le seti yedatha ebanzi yokujolisa kubaphulaphuli abajolise ngakumbi kunye nokunika ingxelo. Oko kuthetha ukuba ungangenisa idatha yabakhuphisana nabo ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
Iziphumo zexesha lokwenyani zeBrand
Ngaphandle kweembono kunye notshintsho olusezantsi lwefaneli, iFlip ikwavumela abathengisi ukuba balandele umkhondo wokuphakamisa uphawu ngokudibanisa iimetwork zokuzibandakanya ze-OTT kunye nokuqonda okusekwe kuphando ukulinganisa ulwazi, ukukhumbula kunye nokuqonda. Ke nakwabo bangekaguquki okwangoku, iFlip ikuvumela ukuba uthathe ukubetheka kulwalamano lwentengiso ukuze ubone ukuba ngaba iintengiso zakho ziyahambelana nabaphulaphuli bakho.
Fumanisa ukuba yintoni ehambisa ngenene inaliti
Kwintengiso yedijithali, zininzi izinto eziguqukayo ezinokuthi zibangelwe ngumkhankaso wempumelelo. Inyani yile, abaphulaphuli banako, kwaye kunokwenzeka ukuba, babe nokuvezwa kwiintengiso zakho kwezinye iindlela zosasazo ngaxeshanye kulo lonke iphulo lakho le-OTT. Ngaba ngekhe kulunge ukuphawula ukuba ngawaphi amacandelo omkhankaso wakho aqhuba iziphumo? NgeFlip, iimveliso zinokuphendula umbuzo: kubo bonke abantu abathathe inyathelo, bangaphi kubo abenze njalo ngenxa yokuvezwa kwe-OTT ngokukodwa? UFlip ubonelela ngokunyusa ukunyusa iimetrikhi zokulinganisa, ukulinganisa kunye nokuchonga ukuba zeziphi izinto ezixabisekileyo zephulo lakho ezinefuthe elibi kumgca wakho osezantsi kwindlela yomthengi yokuthenga. Inika inqanaba lokutya okuziinkozo ngokwahlula isiphumo kunye nokuseka ixabiso le-OTT kwiphulo lakho lilonke. Ngokuthelekisa amaqondo okuguqula amaqela abonakalisiweyo nolawulo kuzo zonke izinto ezinje ngobuchule, abapapashi, kunye nabaphulaphuli, siyakwazi ukubona ukuba kungakanani umntu anokuguqula xa evezwe kwintengiso yakho kwi-OTT okanye esekwe kumkhankaso othile.
Iminyaka elishumi yoBuchule kwicala lakho
Umatshini ulumke kuphela njengabantu abasemva kwawo, kwaye iqela elisebenza ngeDijithali belisebenza kwividiyo nakwi-OTT ukusukela ngaphambi kokuba ulandele nantoni na. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwisithuba sedijithali, bebesenza kuzo zonke iintlobo zemidiya, ukusukela umva xa kwakufuneka ulungiselele ngesandla. Kwaye malunga neminyaka emihlanu kwisithuba se-OTT uqobo, olu lwazi lwamaziko luthetha ukuba ufumana itekhnoloji enikwe amandla yedatha exhaswa bubuchwephesha obunzulu obuvela kubachwephezi abebekwelinye icala njengabathengisi ngokwabo kwaye benolwazi olunzulu lweemetrikhi abafuna ngokwenene abathengisi. ukubona. Ukuhamba komsebenzi, ukubonwa, kunye nokwenza ingxelo konke kwakhiwe ngokwembono yabathengi ukubonelela ngolwazi oludingayo ukuze uqonde ngokupheleleyo ukusebenza kwephulo.
Ukutsiba kwi-medium entsha njenge-OTT kunokubonakala kunzima, ngakumbi ngoxinzelelo olongezelelekileyo lokwazi ukuba awunakukhetha nyani-kulapho abaphulaphuli bakho kunye nabantu abakhuphisana nabo baya khona. Kodwa ngezixhobo ezifanelekileyo kunye nobuchule kwikona yakho, kwaneyona nto incinci kunye neefemu zinokukhuphisana nabafana abakhulu kwesi sitishi sitsha sishushu. Ngeqonga lokusebenza kweFlip OTT, Unyango lwedijithali luyenza ifikeleleke, ilula, kwaye ifikeleleke kwiimveliso kunye nabathengisi kuwo onke amanqanaba okuphumelela kwi-OTT.
Cwangcisa iDemo yedijithali yeFree Flip
tags: yongezaiyeza ledijithaliflipOttukuthenga iintengisoUlawulo lweentengisoIintengiso ze-ottIntengiso ye ottUhlalutyo lwe-ottUlawulo lomkhankaso we-ottUkulungiselela iphuloiphulongaphaya kwaphezulu